Laascaanood loo laga Xaaran-timeeyey Isu-soo Bixii KULMIYE ee Shalay - somalilandlivemedia
10:08 7. November 2017
Laascaanood( SLL-Yool)-Kaltanka lixaad ee Maalinta loo asteeyey Oloollala Kulmiye, ayaa gabi-ahaanbaa aan ka dhicin Magaaladda Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, kaddib markii dadweynaha Magaaladaasi ka shoobareeyey inuu ka dhaco, sida awgeedna Xisbiga Kulmiye ay u ahayd Maalin-madow oo kusoo korodhay taarikhda oloollihiisa Doorashada Madaxtooyadda.
Warar amuurtaa ku saabsan oo Wargeyska Yool ka helay xarunta gobolka Sool ee Laascaanood, ayaa sheegay diidmada qayaxan ee reer Laascaanood inay tahay mid ka dhalatay falkii jimihii ka dhacay fagaaraha Beerta Xoriyadda Laascaanood, kaasoo dabada ku hayey markii Ciidan ilaalo ah oo la socday wafti uu hoggaaminayey Musharraxa Kulmiye Muuse Biixi ku fureen Rasaas dadweyne gadoodsan oo ku sugnaa fagaaraha. Wararku waxay intaa raaciyeen in odayaasha iyo waxgaradka Magaaladda Laascaanood ku war-geliyeen masuuliyiinta Xisbiga Kulmiye ee Gobol, in haba-yaraatee Xus Kulmiye leeyahay aan lagu qaban Magaaladda Laascaanood, iyadoo laga taxaderayo in isu-soo baxa Kulmiye ay ka dhashan rabshado ka ballaadhan kuwii hore.
Dhacdadan soo foodsaartay Xisbul-xaakimka Kulmiye, iyadoo lagu gudo-jiro hadda maalmihii u dambeeyey ee oloollaha Doorashadda Madaxtooyadda, ayaa tallaaabadan murugada leh ee lasoo deristay Xisbiga Kulmiye waxa uu ku waayey taageeradii uu ka filaayey Gobolka Sool, gaar ahaan degmada Laascaanood. Waxa kaloo dhacdadani noqotay tallaabo cad oo muujinaysaa inuu Xisbiga Kulmiye qaaday dhabbihii guuldarrada, maadaama uu gacantiisa ka baxay mid kamid ah gobollada la saadaalinaayo in codadkiisa lagu kala badinayo tartanka Doorashadda Madaxtooyadda.
Ciidanka Booliska Oo Hawgalo Ay Ka Fuliyeen Hargeysa Ku Soo Xidhay Rag Laga Shakiyey.. Video
Guddoomiye C/qaadir Jirde Oo Si Rasmi Ah Magaalada Berbera Uga Furay Tartan Ciyaareed Kubada Cagta Ah
[DAAWO:-]Xisbiga WADDANI oo Xaflad ugu Fooladeeyey Siyaasiyiin iyo Taageerayaal Baaxad weyn oo Ka Soo Jeeda Beesha Xaamud Cismaan ee Sacad Muuse oo Ka Soo Guuray Xisbiga KULMIYE
Halkan Ka Daawo Orodyahanka Mo Farah Oo Ciyaartiisu ugu danbaysay Guulaystay
Newer Post..Maayir SOLTECO Cashuurtii Danyarta laga soo Uruurinayay ayuu KULMIYE ugu ololeynayaa..” Xamse Ciise
Older Post Rajaddii KULMIYE oo ku Ururtay Budhcad Kaadhadhka Iibsata Reer Awdal oo ku Hanjabay inay Ciqaab Marin-doonaan Dadka Kaadhadhka Iibsanaya